Isihlahla somyalo: Khombisa izinkomba njengesihlahla kuLinux | Kusuka kuLinux
Isihlahla somyalo: Khombisa izinkomba njengomuthi ku-Linux
Kwesinye isikhathi ukuzulazula kwizikhombisi-ndlela ze-Linux kusuka kukhonsoli kuba nzima kakhulu, ngokungeziwe, kwezinye izimo sidinga ukwazi ukwakheka kwezinkomba ezithile, indlela yemvelo yokwenza lokhu ukukhombisa izinkomba ezisesimweni somuthi.
Ukubonisa izinkomba njengesihlahla kuLinux kulula, ngenxa yokusetshenziswa isihlahla, engafakwanga ngokuzenzakalela ekusatshalalisweni okuningi kweLinux kepha itholakala kumakhosombe asemthethweni.
izinkomba ezimise okwesihlahla
1 Uyini umyalo wesihlahla?
2 Ukufaka umyalo wesihlahla ku-Linux
3 Ungawusebenzisa kanjani umyalo wesihlahla
Uyini umyalo wesihlahla?
Kungumyalo osetshenziswa kabanzi ngabasebenzisi beLinux, esivumela ukuthi sibonise ngendlela ecacile futhi ehlelekile isikhundla sobukhosi bezinkomba zohlelo lwethu lokusebenza.
Umyalo wesihlahla futhi ukuvumela ukuthi ubhale izinkomba zamadivayisi angaphandle.
Ukufaka umyalo wesihlahla ku-Linux
Kwamanye ama-distros umyalo wesihlahla ufakwa ngokuzenzakalela, kepha ezimweni eziningi lokhu akunjalo, ezimweni eziningi kwanele ukuwufaka usebenzisa izinqolobane ze-distro ngayinye.
Ungasebenzisa noma iyiphi yale miyalo elandelayo ukuyifaka ku-distro yakho oyithandayo.
$yum ukufaka isihlahla -y #Centos y Fedora
Ungaqinisekisa ukuthi ukufakwa kuqede ngempumelelo ngokusebenzisa umyalo wesihlahla
Ungawusebenzisa kanjani umyalo wesihlahla
Indlela enhle yokufunda zonke izinzuzo ezinikezwa umyalo wesihlahla ngokusebenzisa imibhalo uqobo yomyalo, ukwenza lokhu kusebenze kusuka ku-terminal $ man tree
Ngendlela efanayo, ngezansi ngikunikeza uhlu, ngezinye zezinketho ezisetshenziswe kakhulu kulo myalo:
Kunezinye izinhlanganisela eziningi zomyalo ezingaba wusizo olukhulu lapho kukhonjiswa izinkomba njengomuthi ku-Linux.
Khumbula ukuthi amapharamitha alo myalo angahlanganiswa, kufinyelelwe ngokwesibonelo «khombisa uhlu lwawo wonke amafayela kufaka phakathi afihliwe ngendlela yawo efanele«, Ngalokhu senza kahle tree -af
Ngakho-ke siyethemba ukuthi ungazuza kakhulu kulo myalo olula kodwa owusizo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Isihlahla somyalo: Khombisa izinkomba njengomuthi ku-Linux
I-athikili enhle kakhulu futhi emfushane, iLizard!. Njalo lapho abafana bengitshela ukuthi kunohlelo lweWindows olwenza into efanayo, ngangibafundisa umyalo wesihlahla. Bambalwa kubo abawazi umyalo we-MS-DOS dir / s nezinye izinketho.
Bengazi lo myalo ngamawindi futhi iqiniso ukuthi, bekubukeka kungajwayelekile kimi ukuthi i-linux ibingenayo ngokuzenzakalela kepha ihle kakhulu uma isifakiwe.
UTaty aguilar kusho
Kuhle kakhulu !!, Ungisindisile, izinsuku eziningi kangaka ngisesha kuze kube sekugcineni, ngiyabonga !!!!!
Phendula uTaty Aguilar
Okukhazimulayo !! Isebenze kahle, ngiyabonga kakhulu ngosizo.
I-KSmoothDock: Idokodo elilula futhi elihle lePlasma 5
IVMware ijoyina iLinux Foundation njengelungu leGolide